China tsika eyelash kurongedza zvakapfava gobvu zvakagadzirwa nemaoko 25mm 3d Mink eyelash fekitori uye vagadziri | Weiti
Yakasarudzika Eyelash Kurongedza Zvakapfava Zvakakora Zvakagadzirwa Nemaoko 25mm 3d Mink Eyelash
1, yepamusoro giredhi 100% chaiyo mink fur
2, Zvehunyanzvi zvakagadzirwa nemaoko kuve nechokwadi chemhando yepamusoro
3, 25mm gobvu refu shamhu
4, Reusable uye inogara kwenguva inosvika makumi maviri neshanu kusvika makumi matatu mashandisiro
Yakareba & gobvu & Fluffy
Simbisa maziso ako neasina maziso eziso
Haaremi uye anoshandiswazve, akagadzirwa nemaoko, ehutsinye-asina maronda akakwana kune chero chiitiko uye chimiro cheziso; ivo vachawedzera vhoriyamu, kudzika uye tsananguro yekugara-kwenguva refu, kuratidza-kumisa mhedzisiro.
Yakagadzirwa nemaoko, yakakwana
Yedu 25mm mink eyelashes enhema ese ane hunyanzvi akagadzirwa nemaoko, isu tinoteerera kune yakanakisa mhando, kuitira kuti iko kukombama uye kumonera kwemaziso eyelashes zviite. Eyelashes edu enhema anonyatsobatanidza eyelashes ako echisikigo, anowedzera kureba uye vhoriyamu, uye gadzira kutaridzika kwakanaka. Yakagadzirirwa kuwedzera kunaka kwako uye hunhu.
√ Reusable uye inogara kwenguva refu
Kunyangwe mazhinji mink eyelashes ekunyepedzera achikubvumidza kushandisa zvekare kusvika kagumi, edu 25mm mink eyelashes enhema akanyatsogadzirwa uye anogona kushandiswa kwenguva yakareba, makumi matatu nguva yekushandisa, pasina kurasikirwa nehunaku hwavo.
√ Yakapfava uye yakasununguka kupfeka
Yedu yakasarudzika-inotaridzika mink eyelash inogadzirwa nekotoni bhendi, iri nyore kushandisa, yakapfava uye yakasikwa kune iyo inobata, kurerutsa kusagadzikana kwekupfeka nhema eyelashes.
Iine 100% Siberian Mink pazera rakanakisa kubva kune emahara-renji nzvimbo dzinochengeterwa mhuka uye dzakashandiswazve munguva yekudonha mwaka, yedu maronda inopa yakasarudzika kusarudzwa kwechokwadi Mink Lashes. Nekushandisa yepamusoro giredhi remink mink, yedu mink lashes yakasungirirwa uye yakashongedzwa, asi yakapfava uye yakapusa. Isu tinopa kuwanda, kurebesa, crisscross uye yakasimba mink fur lashes iyo yakakodzera uye yakakosha pachiitiko chega chega, senge mazuva ese makeup, pati, nezvimwe.
Yakasimba uye isiri nyore kudzima
Yakanaka kurongedza uye yakasarudzika chitaridzi
Akasiyana akagadzirira akagadzirwa masitaera
Kupurinda eyelash logo kudhinda:
1, Yekugadzirira yakagadzirirwa eyelash kurongedza, isu tinogara tichishandisa UV kudhinda nzira
Kudhindisa UV inzira yekudhinda iyo inoshandisa ultraviolet mwenje kuti iome uye irape inks. Izvo zvinodikanwa kuti uenzanise inki ine photosensitizer ine UV inorapa mwenje.
2, Yekugadzika eyelash kurongedza, isu tinotsigira akasiyana nzira yekudhinda
Yakasarudzika yakavanzika logo pane iyo kurongedza, kazhinji isu tinotsigira silika skrini yekudhinda, UV kudhinda, kupisa kutsika uye zvichingodaro. Iwe unongoda kutiudza isu mhedzisiro yaunoda, ipapo isu tinogona kuita chaizvo sekudiwa kwako.
Maitiro ekushandisa marara enhema?
Bvisa eyelashes enhema aunoda kupfeka kubva mubhokisi uye chengeta iro bhokisi rekuchengetedza nyore mushure mekushandisa.
Shandisa eyelash tweezers kubvisa eyelashes enhema kubva mutray.
Measure lashes kune base yemusvo lash mutsara.
Pashure: Yakasarudzika Yakasarudzika Label Mabhokisi Wholesale Fluffy 25mm Mink Eyelashes
Zvadaro: Wholesale Yakavanzika Label 100% Yakaitwa nemaoko Hutsinye Mahara 3D Mink Eyelashes Vendor
China Factory Yakachipa Wholesale Lashes OEM Nhema ...
YOLANDA Chimiro Bulk Yakagadzirwa nemaoko Mink Strip Lashes 2 ...
Lash Vatengesi Custom Private Label Bulk 25mm 3d ...
Super Charming 100% Ruoko Yakagadzirwa 3D 25mm Ruvara Min ...
Ziso Lashes, eyeliner, lipgloss, mink lashes, Vatengesi ve Eyelash, Eyelash Kuwedzeredzwa,